Caqabadaha doorashada Soomaaliland oo wada jir looga arinsanayo.
Guddida doorashooyinka Somaliland, ayaa maanta la filayaa in ay kulan gaar ah la yeeshaan hogaamiyeyaasha saddexda xisbi, kuwaasoo ka arrinsanaya arrimaha doorashooyinka.
Kulankan ayaa lagu soo hadal qaaddi doonaa xaaladda abaareed ee taagan, mudada gaaban ee doorashadda ka hadhsan iyo kaadhadhkii diiwaangelinta oo aan wali la qaybin iyo sida carqaladaha ku gadaaman inay doorasho dhacdo xal looga gaadhi karo.
Doorashada Somaliland ayaa loo qoondeeyey inay dhacdo 28, march, 2017, haseyeeshee waxa hor taalla caqabado badan oo ay ka mid yihin qaybinta kaadhadhkii lagu codaynayey oo wali la qaybin, dadkii abaaruhu ku dhaceen oo ka fogaaday goobihii ay markii hore ka galeen diiwaangelinta codbixiyeyaasha, taas oo wakhtigan adag tahay in dadkaaasi ka hayaamay deegaankooda kaadhadh la siiyo iyo waxa laga yeelayo.
Xisbiyadda qaar, gaar ahaan labadda xisbi ee mucaarad ayaa iyaguna qaba in aanay suurogal ahayn in doorashaddu ku dhacdo wakhtigii loogu tallogalay, maadaama oo dad faro badan oo kaadhadhka qaadan lahaa ka hayaameen deegaankii ay markii hore ka qaateen, haseyeeshee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo xukuumadda ayaa iyaguna ku adkaysanaya inay wakhtigeeddii dhacdo, maadaama oo wixii kaga beegnaa kharashka iyo hawlaha kale ay bixiyeen.
Guddida doorashooyinka ayaa la filayaa inay soo bandhigto caqabadaha ka hortaagajn qaybinta kaadhadhkii oo ay hore u sheegeen inay gobolada qaar gaadhsiin doonaan kaadhadhkii lagu codaynayey, ilaa hadda ma jiro wali gobol loo qaybiyey kaadhadhkii, iyaddoo mudaddii doorashadda loo qoondeeyeyna ka hadhsan tahay laba bilood wax ka yar, inkastoo ay guddidu ku adkaysteen inay iyagu dhankoodda diyaar ka tahay wax walba oo aanay dhankooda qabyo ka hayn.
Guddida doorashooyinka iyo xisbiyada qaranka ayaa maanta iyagu ka arrinsan doonna in loo baahan yahay in muddo kale loo kordhiyo wakhtiga doorashaddu dhacayso iyo in la isla qaato in wakhtigeeddii doorashaddo dhacdo oo mudadda gaaban ee hadhsan la dadajiyo hawlahah ku xidhan hawl socodka doorashadda.
Beesha caalamak oo markii horaba diidanayd in la kala qaado doorashadda wakiilada iyo madaxweynaha, oo codsiyo badan oo loo diray iyo kulamo badan oo guddida doorashooyinku la yeesheen beesha caalamka ee lacagta ugu badan ku bixisay arrimaha doorashooyinka ayaa ugu dambeyn ogolaaday inay bixiyaan, wallow ay ku xidheen shuruud ah in aanay mar dambe dib u dhicin doorashaddo, haddii muddo kordhin la sameeyana waxa buraysa shuruudii lala galay Somaliland oo ahayd in aanay mar dmabe dib u dhicin.
Haddii ay saddexda xisbi, xukuumadda iyo guddida doorashooyinku isla qaataan in dib loo dhigo, waxa adag sidii mar kale loogu qancin lahaa dalalka beesha caalamka ka tirsan ee kharashka bixisa ee markii horaba diidanayd inay doorashaddo dib u dhac ku timaaddo.
Si kataba ha ahaatee, waxa guddida doorashooyinka xal xidhaale adag ku noqonaya haddii xisbiyaddu isku raacaan muddo kordhin sidii beesha caalamka mar labaad looga dhaadhicin karo in mudadda la kordhiyo.(Hol)